Wararkii ugu danbeeyay Madaxweynaha Galmudug oo ku sugan Magaalada Muqdisho – Mudug24
HomegalmudugWararkii ugu danbeeyay Madaxweynaha Galmudug oo ku sugan Magaalada Muqdisho
Wararkii ugu danbeeyay Madaxweynaha Galmudug oo ku sugan Magaalada Muqdisho
Madaxweynaha Galmudug ayaa ku sugan Magaalada Muqdisho halkaasi oo kulamo kala duwan uu ka wado madaxweynaha ayaa kulankii ugu danbeeyay la qaatay Gudoomiyaha Gobolka Banaadir Cumar Finish iyagoo ka wada hadlay xaalada kala duwan oo ku aadan arimaha siyaasada Somaliya iyo Raisal wasaaraha Cusub ee dhawaan lasoo magacaabayo.
Madaxweyne Qoor Qoor ayaa dhanka kale isla maanta la kulamay madaxweynihii hore ee Galmudug Mudane Xaaf iyagoo ka hadlay xaalada Galmudug iyo arimaha doorashooyinka Galmudug iyagoo isla soo hadal qaaday sida Galmudug uga gudbi karto xaalada adag ee ka jirta Somaliya.
inkastoo warbaahinta gudaha somaliya ay bahiyeen in Madaxweynaha Galmudug loo magacaabayo hada warbaahinta mudug24 oo xiriir badan la sameesay wasiiro galmudug ka tirsan ayaa ku xaqiijinay in aysan jirin qorshe madaxweynaha uu wado isla markana ku noqonayo Raisal wasaare.
Taasi badalkeeda madaxweynaha ayaa wado dadaalo ku aadan sidii loo soo magacaabi lahaa Raisal wasaare la jaan qaadi kara xaalada taagan isla markana sii wadi kara taageerada Galmudug ee dowlada Somaliya.
Wixii ku soo kordha kala mudug24 oo si hoose ula socota arimaha Galmudug.
Barlamaanka Dalka Turkiga oo Ansixiyay Sharci ku Adag Bulshada